InboxAware: Ntinye Igbe Ntanetị Email, Ntọala na Nlekọta Aha | Martech Zone
InboxAware: Ntinye Igbe Ntanetị Email, Ntọala na Nlekọta Aha
Izipu ozi na igbe mbata na -aga n'ihu na -abụ usoro na -akụda mmụọ maka azụmaahịa ziri ezi ka ndị spammers na -aga n'ihu na -emegbu ma na -emebi ụlọ ọrụ ahụ. Maka na ọ dị nfe ma dịkwa ọnụ ala izipu ozi email, ndị spammers nwere ike wụpụ site na ọrụ ruo ọrụ, ma ọ bụ ọbụna edemede nke ha na -eziga site na sava na sava. Ndị na -ahụ maka ịntanetị (ISPs) amanye iji nyochaa ndị ziri ozi, wulite aha na izipu adreesị IP na ngalaba, yana ịlele na ọkwa email ọ bụla iji gbalịa ma jide ndị omempụ.
O di nwute, site na nlezianya di ukwuu, ulo oru na-achota onwe ha na algorithms ma na-eburu ozi email ha ozugbo na nzacha ahihia. Mgbe a gafere na junk nchekwa, e teknụzụ nyefere email na; n’ihi nke a, ụlọ ọrụ amaghị maka eziokwu ahụ na ndị debanyere aha ha enwetabeghị ozi ha. Ọ bụ ezie na ejirilarịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị gị aka gị na onye na-eweta ọrụ email gị, nnyefe a dabere na algọridim.
Agbanyeghị ma ị wuru ọrụ nke gị, nọ na adreesị IP nkekọrịta, ma ọ bụ adreesị IP raara onwe ya nye… Na, ọ bụrụ na ị na -akwaga na onye na -eweta ọrụ ọhụrụ yana na-eme ka adreesị IP na-ekpo ọkụ, nlekota oru di oke nkpa iji hụ na ndị debanyere aha gị na-ahụ ozi gị.
Iji nyochaa nke ọma ma email ha ọ mere na igbe mbata karịa folda junk, ị ga-etinye aha nke mkpụrụ nke ndị debanyere aha gafee ISP. Nke a na-enyere ndị na-ere ahịa email aka nyochaa ntinye igbe wee dozie nsogbu dị na nyocha, ọkwa aha, ma ọ bụ ọkwa email iji chọpụta ihe kpatara ejiri email ha gaa na junk nchekwa.
Ngwaọrụ nnabata InboxAware
InboxAware nwere njirimara niile dị mkpa maka nyochaa ntinye igbe igbe email gị, aha ya na nnabata ya niile:
Nlekọta Aha Email - Inweta udo nke uche na akpaghị aka alerts na fọrọ nlekota. Setịpụ ụzọ mbata gị ma mee ka anyị mara gị mgbe ihe adịghị mma.
Nnwale Ndepụta Mkpụrụ - nke e mere ka omume kacha mma nke ndị ọkachamara email na -eji, nlele ntinye igbe igbe InboxAware na -enyere ndị ahịa email aka ịmata ma merie nzacha nyocha na ọnyà spam nwere ike ịkwụsị ozi ịntanetị gị tupu ị kụọ izipu.
Nkwupụta mgbapụta - InboxAware na-enye ndị ọrụ nghọta na nyocha microscopic nke data email ha niile, enwere ike ịdepụta ma kesaa na-enweghị mbupụ n'ime akụkọ agụ naanị.
InboxAware na-enye gị ohere ịhazi dashboard gị site na ịhọrọ site na ọtụtụ wijetị na-akọ akụkọ ma na-edozi ha site na ịrụ ọrụ ịdọrọ na dobe. Usoro ha niile nke wijetị mmekọrịta na-enyocha arụmọrụ email gị n'ofe ọtụtụ ihe ngosi.
Dee akwụkwọ InboxAware
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọ anyị na edemede a.
Tags: nnapụtamgbapụta mgbapụtaozi nnapụta emailaha emailnjikwa aha njirimara emailemail nlekota nlekotanlekota igbe oziinboxawarendepụta mkpụrụ
Ihe Mmụta Mụtara: Social Media Platform na Blockchain Mass Adoption
Wzọ atọ iji hụ na itinye aka na obere ihuenyo gị nwere nnukwu mmetụta